Sinakho amathuba ukufihla amaphutha amancane ukubukeka nge ezihlukahlukene nezinsiza, ngabe kungcono izingubo noma izimonyo. Nokho, kuthiwani uma ilungelo iso twitches? Phela, ayikwazi ukulawulwa. It uhlala ukuqonda umthombo lesi sifo futhi ukuzama ukuqeda ke - bebodwa noma ngosizo onguchwepheshe. Twitches nasesweni lakhe lokunene: izimbangela nezindlela ukulawula
Lapho kukhona uphawu ezinjalo ezingathandeki iningi lethu Cishe otmahnetsya zezinkinga yilo mcabango: ". It kuzodlula ngokushesha" Nokho, ngokuvamile, ngempela inkinga ngoba zezimbangela amanga ezijulile emzimbeni.
Uma unelungelo iso twitches, ngiyakhumbula ukuthi kwakubaluleke kangakanani kanzima ngesikhathi sokugcina ngawe. Izivivinyo, tinkinga temndeni, nokudilizwa emsebenzini - konke lokhu kuba nomphumela omubi kakhulu isimiso sethu sezinzwa. It buhlobene eduze imisipha uxhumana nabo. Ngisho noma awuboni okwesikhathi injabulo ecacile, umzimba usengakwazi ukuzwa eziningi ukucindezeleka. Lokhu kubonakala ngendlela imisipha. kwaphawuleka ngokukhethekile lapho ilungelo iso twitches, ngoba isikhumba mncane kakhulu futhi ebucayi kule ndawo.
Uma isaziso wokuqala yakhe noma umzimba wakhe isici okufana, ungazama ukususa ngokwakho. Ukuze wenze lokhu okudingeka uyenze ... lutho. Vele unethezeke bese zenziwe ukuthi limnandi. Okuhle Ngomsebenzi simo zokuzilibazisa ngokwemvelo. Kodwa uma izinto enizithandayo - ekutadisheni Inthanethi, iholidi bazuze ungeke uhambe.
Isizathu ukuthi ilungelo iso twitches, kungaba ngokwengqondo nje kuphela kodwa futhi ukucindezeleka ngokomzimba. Namuhla, ingxenye enkulu yomphakathi noma ngokusebenza ezindaweni kukhompyutha, noma oqhuba naye ngesikhathi sakhe sokuphumula zonke. Futhi ngezinye izikhathi - nokuthi, nomunye kanyekanye. Amehlo ngesikhathi esifanayo umsebenzi omncane kakhulu. Ngakho-ke, imisipha uqale ukudikiza angesabi ukuthatha ingcindezi ngokwakho.
Okuphuma kuyafana - ukuphumula. Uma ngezizathu ezithile, akuzona sincike wena, awukwazi bayayeka ukukhulumisana nabanye electronic, ukuhlinzeka wena okungenani amakhefu zemizuzu emihlanu. Ngalesi sikhathi kudingeka ukushaja futhi iso, futhi wonke umzimba.
Uma une Twitch isikhumba ngaphansi nasesweni lakhe lokunene, isizathu kungenzeka yiyona eyenziwa ngezinkathi ezithile zonyaka amavithamini. Lokhu kungaba ukuzibonakalisa entwasahlobo noma ukuwa. Isamba esidingekayo umsoco egazini akusho flow, okuholela umsebenzi enciphile imisipha periocular. Siza ukuxazulula inkinga izithelo fresh noma amavithamini ngefomu iphilisi.
Ukucindezeleka -, ngeshwa, hhayi netinkinga letijulile, ngenxa ezingasetshenziswa ukudikiza iso lakho. Psychosomatics - into sina, futhi ukusikwa okungalindelekile kwemisipha ebusweni angaba wuphawu ukuthi ukwephulwa umzimba zenzeka. Ngezinye izikhathi ngisho ukhulume mayelana ukuvuvukala ebuchosheni. Kodwa ungesabi: nje vakashela udokotela futhi zidlule ukuhlolwa, ukuze uqiniseke ukuthi konke kuhamba kahle.
Udinga unakekele impilo yakho, futhi uma uqaphela ukuthi ngokuvamile ukunyakazisa iso, ungavumeli ke busebenze.
Indlela ukukhetha skates roller izingane 3, 5, 6, 7, iminyaka engu-11? Indlela ukukhetha skates roller izingane, ski saqala?
Dmitry Zenich: Biography futhi Filmography
Ihlathi Soul: izithombe emangalisa photographer abasha bevela eFinland